Ady… midi-droa izao | NewsMada
Ady… midi-droa izao
Par Taratra sur 16/04/2021
Hanao ahoana ihany? Tsy inona fa izao ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao: mihamafy ny fiatrehana ity hoe andiany faharoa, mihasarotra ny raharaha, mihalalina ny fahavoazana, mihamitombo isa ny tratran’ny tsimokaretina Coronavirus… Nefa tsy misy resy tsy miady amin’izao. Ady fiady io, tsy maintsy atrehina.
Eo ihany izay firongatry ny aretina sy ny hery vaikany izay fa misy ny manampy trotraka amin’izany. Efa tsy tenenina amin’izany intsony, ohatra, fa manata-bava ireo manentsin-tadiny amin’ny tsy fanajana ireo fepetra sakana, indrindra ny fanaovana arotava: miandany amin’ny aretina rehefa tsy miaro tena sy mitsinjo ny hafa?
Tsy inona fa karazana famonoan-tena sy famonoana ny hafa tsotra izao izay tsy fanajana fepetra sakana iadiana amin’ny fihanaky ny valanaretina izay. Tsy mahalala na tsy miraharaha afa-tsy ny fitadiavana sy ny fiainana isan’andro vaky? Fa misy koa ny minia manararao-paty amin’izao ady mafy sy sarotra manahirana ny firenena izao.
Tsy iza tsy aiza ireo manararao-paty fa ireo mitonon-tena hoe marary hahazoana fanafody maimaimpoana havadika ho varo-maizina fa tsy marary tsinona ny tena. Izay ny anisan’ny mahatonga ny tsy fisiana na ny tsy fahampian’ny fanafody eny ifotony amin’ny tobim-pahasalamana sasany, hany ka sahirana sy fadiranovana izay tena marary.
Soa ihany, tsara ratsy: nalaky hitan’ny tomponandraiki-panjakana ny raharaha. Nisy ny fanaraha-maso, famakiana bantsilana, fampitandremana… Na izany aza, tsy kely lalana mandrakariva ny ratsy, matoa tonga amin’izay fanaovana varo-maizina amin’ny alalan’ny tranonkalam-pifandraisana sy ny tambajotran-tserasera.
Mety mahafaly ny sasany izay mampalahelo ny hafa? Izay no hitandremana sy hitsinjovana mialoha mandrakariva izay mety hitranga amin’izay lazaina sy atao. Eo ihany ny ady amin’ny aretina fa tsy maintsy atrehina koa ny ady amin’ny fahavalom-pirenena sy ny fanetribe… mety ho ratsy sy mamono lavitra no ho ny tena aretina. Ady… midi-droa izao?